Saameynta Tababarka ee Waxqabadka Shaqaalaha – USE24 GLOBAL MANAGEMENT COSULTANT
Saameynta Tababarka ee Waxqabadka Shaqaalaha
Tababarku wuxuu saameyn ku yeeshaa waxqabadka shaqada ee shaqaalaha si togan. Tababarku waa cunsur dhiirigelin leh oo kor u qaadaya aqoonta shaqaalaha ee shaqada taas oo shaqaaluhu ay ku fiicnaanayaan shaqooyinkooda iyo iyaga
awood u yeesho inaad bixiso natiijooyin wanaagsan. Intaas waxaa sii dheer, tababbarka waxaa loo arkaa inuu yahay habab waxtar u leh la-qabsiga isbeddelada ay kobciso hal-abuurnimada farsamada; tartanka suuqa, qaabeynta ururada iyo tan ugu muhiimsan waxay door muhiim ah ka ciyaareysaa kor u qaadida waxqabadka shaqaalaha. Warqadani waxay falanqeyneysaa xiriirka ka dhexeeya tababarka iyo saameynta uu ku leeyahay waxqabadka shaqaalaha bangiyada. Dhowr tallaabooyin waxqabad ayaa la falanqeeyay oo ay ku jiraan magdhow, qiimeyn waxqabad, iyo ballanqaad urureed.
Kheyraadka bani’aadamku wuxuu noqdey ilo istiraatiiji ah oo lagu kasbado faa’iidooyin lagu tartami karo oo lagu tartamo xilligan caalamiga ah. Raasamaalka aadanaha waa kala sooca u dhexeeya shirkad wanaagsan iyo shirkad weyn. Kheyraadka bini aadamku waa mid aad u muhiim ah oo laf dhabar u ah urur kasta waana sidoo kale ilaha ugu muhiimsan ee ururku leeyahay. Raasamaalka dadku waa waxa lagu kala garto shirkadda wanaagsan iyo shirkad weyn. Mid ka mid ah howlaha muhiimka ah ee Maareynta Kheyraadka Aadanaha ee sida ugu habboon ee looga faa’iideysan karo ilaha aadanaha waa tababar iyo horumarin. Tababbarka iyo horumarka wax ku oolka ahi waa maalgelin lagu sameeyo ilaha bani’aadamnimada ee urur, iyada oo labadaba la helayo dhakhsaha iyo mustaqbalka fog. Tababarku waa qodob muhiim u ah waxqabadka la hagaajiyay; waxay kordhin kartaa heerka aqoonta qof ahaaneed iyo tan urureed. Tababarku wuxuu fure u yahay furitaanka fursadaha koritaanka iyo fursadaha horumarineed si loo gaaro meel tartan ah. Barnaamijyada tababarku waxay gacan ka geystaan ​​sidii loo aqoonsan lahaa shaqaalaha xagga tiknoolajiyadda horumarsan iyo helitaanka karti iyo xirfado adag si loo maareeyo howlaha iyo aasaaska qalabka farsamada cusub ee la soo bandhigay Tababarku wuxuu fududeeyaa cusbooneysiinta xirfadaha wuxuuna u horseedaa kordhinta ballanqaadka, wanaagsanaanta, iyo dareenka lahaanshaha, sidaas darteed wuxuu si toos ah u xoojinayaa tartanka ururka (Acton iyo Golden, 2002; Karia iyo Ah- mad, 2000; Karia, 1999). doorka kaladuwan ee lagu gaarayo himilada urur iyadoo lagu darayo danaha abaabulka iyo xoogsiga (Stone R J. Human Resource Management, 2002). Shaki kuma jiro in tababarku muhiim u yahay dhan walba urur.
Tababarka waxaa dhaqan ahaan lagu qeexay habka shaqsiyaadka shaqsiyaadku u bedelaan xirfadahooda, aqoontooda, dabeecadooda, iyo / ama dhaqankooda (Robbins iyo DeCenzo, 1998). Doorka aasaasiga ah ee tababarku waa in lagu wanaajiyo aqoonta shaqaalaha ee mustaqbalka iyo mustaqbalka waajibaadka iyo mas’uuliyadaha. Tababarku wuxuu ka caawiyaa inay ka beddelaan dhinacyada sida tikniyoolajiyadda iyo tartanka (Dessler 2000). Hadda tababbarka maalmuhu waa qodobka ugu muhiimsan ee ganacsiga adduunka maxaa yeelay tababarku wuxuu kordhiyaa waxtarka iyo waxqabadka shaqaalaha iyo hay’adda labadaba. Tababarku waa muhiim si kor loogu qaado awoodaha shaqaalaha. Daraasadihii ugu dambeeyay waxay muujinayaan in tababarku awood u siinayo ururada badankood inay gaaraan himilooyinkooda iyo ujeedooyinkooda. Marka sidaas la samaynayo shaqaaluhu waxay awoodaan inay bartaan fikradaha shaqada cusub, cusbooneysiiyaan xirfadahooda, hagaajiyaan habdhaqankooda shaqo iyo kobcinta wax soo saarka (Cole 2002). Dhinaca kale, inta badan shaqaaluhu waxay u baahan yihiin tababarro si ay u gutaan waajibaadkooda shaqo ama ugu yaraan kor loogu qaado tayada iyo tirada shaqadooda; dhanka kale, shaqaale xirfad iyo hufnaan leh ayaa ah waxa ugu muhiimsan ee guusha lagu gaaro hadafka ururada. Tababarku wuxuu fududeeyaa cusbooneysiinta xirfadaha wuxuuna u horseedaa inuu kordhiyo ballanqaadka, wanaagsanaanta, iyo dareenka lahaanshaha, sidaas darteed wuxuu si toos ah u xoojinayaa tartanka ururka (Acton iyo Golden, 2002; Karia iyo Axmad, 2000; Karia, 1999). Tababarku wuxuu ahaa isbeddel muhiim u ah kordhinta wax soo saarka ururka. Baadhitaanada badankood oo ay ka mid yihiin Colombo iyo Stanca (2008), Sepulveda (2005) iyo Konings & Vanormelingen, (2009), waxay muujiyeen in tababarku yahay aalad aasaasi ah oo wax ku ool u leh ku guuleysiga himilooyinka iyo himilooyinka shirkadda. waxqabadka sare iyo wax soo saarka ururka. Tababarku waa aalad lagu buuxinayo farqiga u dhexeeya shirkadaha waa inay si caqli leh ugu adeegsadaan hagaajinta wax soo saarka shaqaalaha. Armstrong (2000) wuxuu ku doodayaa in shaqaalaha tababaran inta badan ay si fiican ugu shaqeeyaan koox ahaan maxaa yeelay qof kastaa wuu ka warqabaa rajada laga qabo isla markaana si wada jir ah ayuu ugu guuleysan karaa. Intaas waxaa sii dheer, shaqaalaha hela tababarka joogtada ah waxay u badan tahay inay aqbalaan isbedelka oo ay la yimaadaan fikrado cusub. Tababarku wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa, muujiyaa waxqabadka sidoo kale wuxuu kordhiyaa wax soo saarka, ugu dambayntiina wuxuu shirkadaha galiyaa meesha ugu fiican ee ay ku wajihi karaan tartanka isla markaana ay ku sii jiri karaan hogaanka. Daraasadihii la soo dhaafay waxay bixinayaan caddeynta la xiriirta saameynta wanaagsan ee barnaamijyada tababarka ee shaqaalaha iyo waxqabadka urur ahaanba. Tababarku wuxuu xiriir toos ah la leeyahay waxqabadka shaqaalaha. Xiriir muhiim ah ayaa laga dhex helay tababbarka shaqaalaha iyo waxqabadkooda ka dhasha fulinta howlo kala duwan. Caawinta tababbarka shaqaaluhu waxay aqoon u leeyihiin shaqooyinkooda waxayna awoodaan inay bixiyaan natiijooyin wanaagsan.
Daraasaddan ayaa loogu talagalay in lagu cabbiro heerka waxqabadka marka la eego bixinta tabobarrada. Waxay sidoo kale qiimeysaa saameynta tababarku ku leeyahay waxqabadka shaqaalaha shaqooyinkooda. Ujeeddooyinkaas annaga oo tixgelinayna, waxaan u malaynaynaa in tababarku si gaar ah ula xiriiro waxqabadka shaqada ee shaqaalaha
Daraasadda waxaa lagu sameeyay 108 shaqaale banki ah. Fahamka jawaabeyaasha fahmada badan ayaa lagu cabiray iyaga oo waydiinaya inay muujiyaan jawaabtooda miisaanka 5-dhibcood ee Likert ee laga keenay 1 = aad ayaan u diidanahay 5 = aad ayaan u raacsanahay. Qaabka daraasadda waxaa ku jira hal isbeddel madax-bannaan oo kala ah, tababar iyo hal ku-tiirsanaanta waxqabadka shaqaalaha ee ku tiirsan. Tirakoobka sharraxaadda waxaa loo isticmaalay in lagu cabbiro heerka laga qabo dhammaan aragtiyadaha wax lagu barto. Dheeraad ah, isku xirnaanta iyo falanqaynta dib-u-eegista ayaa loo qaaday si loo qiimeeyo xiriirka iyo saameynta qaraabo ee isbeddelayaasha madaxbannaan (tababarka) ee ku-tiirsanaanta ku-tiirsan sida, waxqabadka shaqaalaha.
Doorshooyinka lagu baaray daraasaddan waa:
1. Doorsoome Madaxbanaan: Tababar
2. Ku-tiirsanaanta Isbeddelka: Waxqabadka Shaqaalaha
Falanqaynta sharraxaadda ee xogta, waxay muujineysaa in leexashada saxda ah ee labada doorsoome ay ka yar tahay 1. Sida laga soo xigtay Cohen (2003), qaybinta caadiga ah ee ka weecashada heerka xogta waa inay lahaataa 0 ilaa 1. Sida muuqata waxaa weeye in heerka leexashada ee labada doorsoomayaalba ay ku dhex dhacayaan baaxadda, xogta waxaa loo tixgelin karaa si caadi ah oo loo qaybiyey iyo Pear- falanqaynta isku xirnaanta wiilka ayaa sidoo kale loo qaadi karaa si loo qiimeeyo xiriirka ka dhexeeya doorsoomayaasha daraasadda.
Jadwalkani wuxuu soo bandhigayaa jihada iyo xoogga ka dhex jira ku-beddelayaasha ku-tiirsan iyo kuwa madax-bannaan. Waxaa la ogaaday inay jirto xiriir wanaagsan oo togan oo udhaxeeya tababarka iyo waxqabadka shaqaalaha ilaa xadka 74.7% (.747 **). Xiriirku wuxuu muhiim u yahay heerka 1% ee muhiimadda laba tijaabo oo dabo ah. Tijaabinta mala-awaalka iyo barashada falanqaynta xiriirka isbeddelka isbeddelka ayaa sidoo kale la qaaday. Natiijada falanqaynta dib u gurashada ee SPSS waxaa lagu soo saaray jadwalka soo socda:
Jadwalka-3 Isugeynta Falanqaynta Falanqaynta
Natiijooyinka dib-u-celinta waxay tarjumayaan qiimaha isku-dheellitirka .747 oo tilmaamaya 1% isbeddel ku yimaada isbeddel madax-bannaan (tababar) waxay sababi kartaa 74.7% isbeddel ku-tiirsane ku-tiirsan (wax-qabad). Sidaa darteed, haddii tababarka lagu kordhiyo 1%, tani waxay keenaysaa in 74.7% waxqabadku kordho. Xiriirkani waa mid wanaagsan oo muhiim ah sida ka muuqata qiimaha yar ee p. Qiimaha isku dheelitirka go’aaminta (R2) waa .559 oo muujineysa xisaabaadka tababarka ilaa 55.9% kala duwanaanshaha waxqabadka waana tan loo arki karaa inay jiri karaan qodobo kale oo keena kala duwanaanshaha 44.1% ee isbedelka natiijada. Qiimaha timaatigu waa 9.634 in tababarku yahay saadaal weyn oo waxqabadka.
Daraasada hada socota waxay baartey saameynta tababarku ku leeyahay joogitaanka. Waxa kale oo ay soo bandhigaysaa in waxqabadka ururku si weyn loo go’aamiyay tababar la siinayo shaqaalaha ama si kale haddii loo dhigo tababarku waa horudhac waxqabadka ah. Waxqabadka ururku wuxuu ku tiirsan yahay ballanqaadka shaqaalaha taas oo iyaduna ku xiran siyaasadda HR ee tababarka iyo horumarka. Daraasada xiriirka tababarka shaqaalaha iyo waxqabadka ayaa muhiim u ah maareeyayaasha maanta maxaa yeelay isbedelada ganacsi ee casriga ah waxay ubaahanyihiin waxqabad badan, saxnaan iyo wax ku ool ah waqti yar iyo kharash waxaana tan lagu gaari karaa oo kaliya qaabeynta, horumarinta iyo fidinta barnaamijyo tababar heer sare shaqaalaha. Iyagoo ku soo bandhigaya barnaamijyo tababar oo dheeraad ah hay’adda shaqaalaha waxay daneynayaan inay helaan aqoon dheeri ah oo ku saabsan shaqooyinkooda taas oo aakhirka ka caawisa inay ka helaan dallacsiinta kooxaha asaaggooda ah Maaddaama tababarku uu saameyn weyn ku leeyahay ballanqaadka shaqada iyo waxqabadka shaqaalaha, waxaa muhiim ah in la xoojiyo lana adeegsado tababarka oo qayb ka ah ajendeyaasha abaabul ee lagu gaarayo himilooyinka urur Waxaa laga yaabaa in gunaanad la sheego in tababarada ilaa xad si weyn u horseedaya waxqabadka shaqaalaha oo hagaagsan laakiin wali maahan qodobka kaliya ee keenaya waxqabad wanaagsan laakiin waa arrimo isku dhafan. Baadhitaano badan oo mustaqbalka ah ayaa lagu sameyn karaa arrimo kala duwan oo ku saabsan warshadaha bangiyada, laakiin si gaar ah ula xiriirta sababaha waxqabadka shaqaalaha sida qiimeynta baahiyaha tababarka, qaabeynta barnaamijyada tababarka, horumarinta, iyo shaqaalayntu waa muhiim in la barto si loo ogaado saameynta ay ku leeyihiin waxqabadka shaqaalaha natiijada bangiyada. Doorka arrimaha maamul iyo hoggaamineed ee tababarka shaqaalaha iyo waxqabadkooduba sidoo kale waa muhiimad gaar ah sidaa awgeedna loo baahan yahay in la baaro sababta oo ah maamule wanaagsan ama hoggaamiye midkood ayaa kordhiya ama yareeya waxtarka tababarka oo aakhirka saameyn ku leh waxqabadka shaqaalaha. Magdhawga shaqaaluhu sidoo kale saameyn weyn ayuu ku leeyahay waxqabadka maxaa yeelay shaqaalaha aan mushahar fiican helin badanaa waxay muujiyaan waxqabad liita.